Warshad hogaaminaysay Guangdong > Muraayad iftiin ah > Product-List
12W Qaababka seddexda-cabbir ee saameeya saqafka 24W Qaabdhiga seddexda-cabbir ee qaabka saqafka 48W Nooca saddex-qaab-cabbireed ee uu hoggaamiyo iftiinka saqafka 16 Wareegga saqafka ee wareega wareega
24W Wareegga saqafka ee wareegsan 48W Wareegga saqafka ee wareegsan 12W Heerka saqafka saqafka wareega 24W Wareegga saqafka saqafka
36W Wareegga saqafka saqafka 48W Heeganka saqafka saqafka ee wareega 48W Neeska saqafka ledhka ah 72W Nalalka saqafka sare ee jiifka
15Waxay hogaanka u qabteen Hexagon 18Waxay hogaanka u qabteen Hexagon 36W Hexagon waxay keentay iftiinka saqafka 42W Hexagon iftiin koronto leh
Shiinaha Muraayad iftiin ah dhoofiyayaasha
Halkan waxaa laga soo xigtey Muraayad iftiin ah soo-saarayaasha at Guzhen Town, Zhongshan City, Gobolka Guangdong, China
Soo saaraha Muraayad iftiin ah laga bilaabo Guzhen Town, Zhongshan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Soo saaraha Muraayad iftiin ah Shiinaha Guangdong.
Shiinaha Shiinaha GuangDong Muraayad iftiin ah soo saarayaasha iyo halkan ku qoran waxaa ka soo baxa iftiinka karnar.
Kooxdan waxaa ka mid ah: Muraayad iftiin ah
Halkan waxaa laga soo xigtey Muraayad iftiin ah
Alaabooyinka loogu talagalay Muraayad iftiin ah
Shiinaha Muraayad iftiin ah macmacaanka
Zhongshan Muraayad iftiin ah dhoofiyayaasha
Zhongshan Muraayad iftiin ah macmacaanka
Zhongshan Muraayad iftiin ah alaab-qeybiyeyaasha iyo nalalka LED, nalalka, nalalka LED, nalalka laydhka, nalalka LED, LED farshaxan, iftiinka fasaxa, laydhka waddooyinka, nalalka saqafka, laydhka laydhka, nalalka laydhka iwm. , Iftiinka daadka, LED nalalka LED, nalalka jilicsan ee jilibka, iftiinka iftiinka iftiinka, iftiinka korontada dhalada, iftiinka iftiinka iftiinka, LED tube neon, iftiinka iftiinka dhulka hoostiisa, iftiinka iftiinka
GuangDong Muraayad iftiin ah alaab-qeybiyeyaasha iyo nalalka LED, nalalka, nalalka LED, nalalka laydhka, nalalka LED, LED farshaxan, iftiinka fasaxa, laydhka waddooyinka, nalalka saqafka, laydhka laydhka, nalalka laydhka iwm. , Iftiinka daadka, LED nalalka LED, nalalka jilicsan ee jilibka, iftiinka iftiinka iftiinka, iftiinka korontada dhalada, iftiinka iftiinka iftiinka, LED tube neon, iftiinka iftiinka dhulka hoostiisa, iftiinka iftiinka
Guzheng Town Muraayad iftiin ah alaab-qeybiyeyaasha iyo nalalka LED, nalalka, nalalka LED, nalalka laydhka, nalalka LED, LED farshaxan, iftiinka fasaxa, laydhka waddooyinka, nalalka saqafka, laydhka laydhka, nalalka laydhka iwm. , Iftiinka daadka, LED nalalka LED, nalalka jilicsan ee jilibka, iftiinka iftiinka iftiinka, iftiinka korontada dhalada, iftiinka iftiinka iftiinka, LED tube neon, iftiinka iftiinka dhulka hoostiisa, iftiinka iftiinka